Ivolontiya - Imbokodo
Bangaki Abantu Abazoba Kulolu Cwaningo Futhi Obani Abangajoyina?
Ucwaningo luzobhalisa abesifazane abangaba ngu-2600 eNingizimu Afrika, eMalawi, e-Mozambique, eZambia, naseZimbabwe. Ukuze bajoyine lolu cwaningo, abesifazane kufanele babe nempilo enhle, bangabi ne-HIV, futhi babe neminyaka ephakathi kwa-18 no-35 ubudala. Laba besifazane kufanele bakulungele ukwenza ukuxilongwa kwezokwelapha nokwelulekwa nokuhlolelwa i-HIV okuvamile. Akufanele ukuthi bakhulelwe noma bancelise ibele. Kukhona nezinye izimfuneko okufanele zifinyelelwe ukuze umuntu afaneleke ukujoyina ucwaningo.
Lokho Ongakulindela Uma Unquma Ukuvolontiya
Sizophendula noma imiphi imibuzo onayo ukuze siqiniseke ukuthi uyazi ukuthi yini ebandakanyekayo uma ubamba iqhaza kulolu cwaningo.
Uzohlolwa umzimba okuhlanganisa nokuhlolwa kwegazi. Amasampula egazi azosetshenziselwa: ukuhlola igciwane le-HIV; ukuhlola ukuthi amasosha akho omzimba asabela kanjani emithini yokugoma yocwaningo; ukuhlolwa kofuzo okulinganiselwe nokunye ukuhlola okuyosiza abacwaningi bayazi impilo yombambiqhaza namasosha akhe omzimba kangcono.
Kulo lonke ucwaningo, uzoya emtholampilo izikhathi ezingaba ngu-17 eminyakeni emithathu. Kwemine kwalokhu kuhambela uyothola imijovo yemithi yokugoma yocwaningo noma ama-placebo. Sekukonke, uyothola imijovo eyisithupha ngesikhathi socwaningo.
Uyocelwa ukuthi unake indlela ozizwa ngayo izinsuku ezi-3 kuya ku-7 ngemuva komjovo ngamunye. Kulesi sikhathi, wena nezisebenzi zesikhungo nizoxhumana ukubona ukuthi uzizwa kanjani.
Ukuhambela kokulandelela kuzohlanganisa ukwelulekwa nokuhlolelwa i-HIV, kanye nokuphendula imibuzo yezisebenzi zasemtholampilo. Lokhu kuhambela kuzoba kufushane kunokuhambela lapho uthola khona imijovo.
Ukwelulekwa nge-HIV kuzokucebisa ngezindlela ezingcono kakhulu zokuzivikela egciwaneni le-HIV ngesikhathi socwaningo.
Ucwaningo luzoqala ukubhalisa ababambiqhaza ngoNovemba 2017 futhi lwenziwa ezikhungweni eziningi eNingizimu Afrika, eMalawi, e-Mozambique, eZambia, naseZimbabwe.